Izindlu e- Druimard - I-Airbnb
Izindlu e- Druimard
Bridge Road, Portree Isle of Skye UK, i-United Kingdom
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Robyn
U-Robyn Ungumbungazi ovelele
I-Druimard Cottage iyindlu yezivakashi efudumele neyamukelekayo etholakala phakathi nemizuzu yesigcawu sedolobha lasePortree. Indawo yokuhlala inikeza ikhishi, igumbi lokulala kanye negumbi lokugezela. Ikhishi lifakwe i-microwave, izimbobo zikagesi, umshini wokuwasha nesiqandisi esincane (sicela uqaphele asikho isitofu noma ihhavini enikeziwe).
I-Druimard Cottage, iyindlu yezivakashi encane elungele umbhangqwana noma umuntu oyedwa ngenkathi bevakashele lesi siqhingi. Inekamelo lokulala, indlu yokugezela kanye nekhishi.
Kubalulekile ukuthi izivakashi zilande izikhombisi-ndlela eziya endaweni ngaphambi kokufika ku-Skye. Lezi zitholakala ngemva kokuqinisekiswa kokubhukha. Nakuba ikotishi likubanga elilula ukuya esigcawini sedolobhana, ukufinyelela kule ndawo kungemuva futhi ukusebenzisa i-GPS noma imishini yendawo ye-inthanethi kubangela ukudideka. Izikhombisi-ndlela zifakwe kuhlu ngaphansi kwezinsiza zesivakashi. Ikheli lise-Druimard, Bridge Road, Portree IV519er
I-Portree iyidolobhana elimatasa ngesikhathi sesizini ephezulu kodwa iyindawo ethule kakhulu ukuze ube nesikhathi sokuphuma empilweni yakho ematasatasa phakathi nobusika. Zonke izindawo zokudlela, amakhefi, izitolo kanye nezindawo zokucima ukoma kungaphakathi kwemizuzu ukusuka eDruimard Cottage ngakho-ke asikho isidingo semoto yemisebenzi yansuku zonke. Isiteshi samabhasi siseVillage square..kunohambo lwansuku zonke lokuya nokubuya e-Inverness. Uma unomdlandla, kukhona uhambo oluhle eSiqhingini nasezindaweni ezizungezile e-Portree ongaluthatha.
U-Emma ungumsingathi kanye futhi uyisakhamuzi sase-Skye. Uyakwazi ukuthintwa ngeselula noma nge-imeyili uma izivakashi zidinga noma yiluphi ulwazi mayelana nokuvakasha kwazo.U-Robyn uhlala e-Australia kodwa uyakwazi ukuphendula noma yimiphi imibuzo evela ezivakashini ngaphambi kokufika kwazo e-Portree.
U-Emma ungumsingathi kanye futhi uyisakhamuzi sase-Skye. Uyakwazi ukuthintwa ngeselula noma nge-imeyili uma izivakashi zidinga noma yiluphi ulwazi mayelana nokuvakasha kwazo.U-Roby…
URobyn Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Bridge Road namaphethelo